ब्याजदर घट्ने संकेतले २२.४४ अंक बढ्यो नेप्से, ३ कम्पनीको कारोबारमा सर्किट ब्रेक | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ब्याजदर घट्ने संकेतले २२.४४ अंक बढ्यो नेप्से, ३ कम्पनीको कारोबारमा सर्किट ब्रेक
on: February 19, 2019 मुख्य खबर, लगानी
फागुन ७, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक २२ दशमलव ४४ अंकले बढेको छ । १ हजार १०२ दशमलव ६९ विन्दुबाट शुरू भएको कारोबार अन्त्यमा २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेर १ हजार १२४ दशमलव ९६ विन्दुमा पुगेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निरूत्साहित भएका लगानीकर्ता सोमवार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति–२०७५ को अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने विषय आएकाले लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका हुन् । सोही कारणले मंगलवारको बजार बढ्न पुगेको लगानीकर्ताको भनाइ रहेको छ । लगानीकर्ताका अनुसार मंगलवार बजार तीनवर्ष यताकै न्यून १ हजार १०२ विन्दुमा पुगेपछि खरीदकर्ताहरू आएका कारण बजार बढ्न पुगेको हो । पूँजीबजारको प्राविधिक विश्लेषकहरूले नेप्सेको बलियो टेवा विन्दु १ हजार १०० रहेकाले बजारले टेवा पाएको अनुमान गरेका छन् । मंगलवारको कारोबारमा अधिकांश समय नेप्से बढेको छ । एक महीनापछि नेप्से दोहोरो अंकले बढेको हो । यसअघि माघ १ गते नेप्से १७ दशमलव ५१ को दोहोरो अंकले बढेको थियो । कारोबारमा आएका १० समूहको परिसूचकमा वित्त समूहको परिसूचक स्थिर रहेको छ । बाँकी ९ समूहको परिसूचक बढेकाले समग्र नेप्से बढेको हो ।
मंगलवार रू. २१ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सोमवारको तुलनामा कारोबार रकम ८ दशमलव ५३ प्रतिशत घटेको हो । सोमवार रू. २३ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेर २३८ दशमलव ९१ विन्दुमा पुगेको छ ।
१७४ कम्पनीको कारोबार, ३ कम्पनीको कारोबारमा सर्किट ब्रेक
१६७ कम्पनीको शेयर कारोबारमा १२९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २१ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९३ प्रतिशत र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य ९ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेर सर्किट बे्रक लागेको छ । त्यस्तै, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशत घटेर सर्किट बे्रक लागेको छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २ सय ३२ मा सर्वाधिक रू. १ करोड २७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।